Uncategorized – Everest Pati
काठमाडौँ : नेपाल सरकारले आगामी अक्टोबर १७ अर्थात् अबको एक सातादेखि विदेशी पर्यटकलाई नेपाल प्रवेश गर्न अनुमति दिने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कोभिड १९ संक्रमणको नेगेभिट रिपोर्ट लिएर आउने विदेशी पर्यटकलाई…
वीरगन्ज (पर्सा), २३ असोज । कोरोना संक्रमण महामारीको कारण यस वर्षको दशैंमा वीरगन्जमा बली निषेध गरिएको छ । त्यस्तै, मेला पनि लगाउन नपाइने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा साउन २२ गते बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले कोरोना…
घुस लिने-दिने दुवै अख्तियारको फन्दामा
भैरहवा : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बुटवल कार्यालयले रुपन्देहीको इलाका प्रहरी कार्यालय लुम्बिनीका प्रहरी नायब निरीक्षक (सइ) गगन सिंह बोगटीलाई पाँच हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरेको छ । साथै घुस दिने व्यक्ति पनि पक्राउ परेका छन् ।…
उपत्यकामा १०१७ जना संक्रमित, अन्य ठाउँमा कति ? हेर्नुहोस् [विवरण सहित]
काठमाडौँ – पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा १५ सय भन्दा बढीमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । देशभर रहेका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणबाट आज १ हजार ५ सय ५१ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको हो। योसँगै देशभर हालसम्म संक्रमित…
गाउँगाउँमा म्याद गुज्रेका सामान !
वीरेन्द्रनगर – दसैं नजिकिँदै गर्दा व्यापारीले खान अयोग्य म्याद नाघेका दैनिक उपभोग्य सामग्री गाउँ पठाउन थालेका छन्। विश्वभरि फैलिएको कोभिड–१९ न्यूनीकरण गर्न लामो समयको बन्दाबन्दी र बेलाबेला लागेका निषेधाज्ञाले बिक्री नभएका त्यस्ता सामान…
वास्तुका हिसाबले घर अगाडि के के राख्नुहुँदैन् ?
स्तुशास्त्र अनुसार घरभित्र मात्र होइन घर बाहिरका सामाग्रीले समेत वास्तु दोष उत्पन्न गराउँछन् । यस्ता वास्तुदोष उत्पन्न गराउन घर आसपासमा भएका वस्तु कारक रहने गर्दछन् । यस्ता वास्तुदोषले शारीरिक, आर्थिक समस्या र पारिवारिक जीवनमा मनमुटाव…
टवल, १८ असोज प्रदेश नं ५ को स्थायी राजधानीका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको प्रस्तावको विरोधमा आज रुपन्देहीका विभिन्न स्थानमा बिहानैदेखि सडकमा उत्रेर प्रदर्शन भएका छन् । राजधानी सार्ने प्रस्तावको विरोधमा यहाँका निजी…
काठमाडौं जिल्लामा मात्र १३७३ जना संक्रमित भेटिए, अन्य जिल्लामा कति ? हेर्नुहोस् [विवरण सहित]
आइतबार काठमाडौं उपत्यकामा १५ सय भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। उपत्यका तीनै जिल्लामा गरी आज १ हजार ५ सय ९९ जना कोरोना संक्रमित थपिएका हुन्। आज थपिएकामध्ये काठमाडौंका मात्र १ हजार ३ सय ७३ जना रहेका छन्। त्यस्तै, स्वास्थ्य तथा…
दमौली । व्यास ४ निवासी बसिर अहमद मियाँलाई गत मंगलबार ज्वरो आयो । उनी जँचाउनका लागि दमौलीको अपोलो अस्पताल गए । तर त्यहाँका चिकित्सकले उनलाई पोखरा जान सल्लाह दिए । सोही दिन उनलाई पोखराको चरक अस्पतालमा भर्ना गरियो । तर त्यहाँको शुल्क महँगो…
ॠषि धमलाको बबाल डान्स, बद्री पंगेनिले प्रश्नको ओईरो, ॠषिसंग लिए त्यो दिनको बदला (भिडियो)
छिल्लो केहि समय पत्रकार ऋषि धमलाको प्रस्तुतिमा निकै परिवर्तन आउन थालेको धेरैको तर्क छ । अहिले धमला दर्शकको रोजाई बन्न थालेको थालेका छन् । उनी पत्रकारिता संगै मनोरंजन तर्फ ढल्केको पनि देख्न सकिन्छ । पहिलोपटक उनले नाचेको दोहोरी गीत भनेको…